गौमुत्र सेवन गर्दा के हुन्छ ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र २७, २०७७ समय: २०:२६:४२
जब क्रोनिक अनि घातक रोगको उपचारको लागि उपलब्ध उपचार पद्धतिले काम गर्दैन तब अनेकन उपायको खोजी थालिन्छ। स्वभाविक उपचार पद्धतिले काम नर्गदा अपनाइने अन्य विधिहरुमा सबैभन्दा कारगर मानिने विधि हो गौमुत्र अर्थात गाईको पिसाब सेवन। गौमुत्र क्यान्सर उपचारको लागि झनै प्रभावकारी मानिन्छ। तर, सत्यता के हो?
गौमुत्रमा सोडियम, पोटासियम, क्रिटिनाइन, फस्फोर र इपिथेलियल कोष हुन्छ। तर यी मिनरल्सहरुले क्यान्सर विरुद्ध काम गर्दैनन्। यी तत्वले माटो पक्का मलिलो बनाउँछ र स्वास्थ्यमा विभिन्न फाइदा पुर्याउने भएतापनि क्यान्सर उपचारको वैकल्पिक विधिको रुपमा लिन कदापी मिल्दैन। प्रश्न आउँछ की गौमुत्रले साच्चै क्यान्सर उपचार गर्छ? उत्तर हो, गर्न सक्दैन। यसले क्यान्सर उपचार गर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार अहिलेसम्म भेटिएको छैन।